Sarudzo yekuisa iwo mafoto kana isu taremedza iyo iPhone haisisipo muGoogle Mifananidzo | IPhone nhau
Sezvo Google yakaratidza zviri pamutemo Mapikicha eGoogle kuGoogle I / O makore maviri apfuura, ini ndagara ndichidzivirira kushandiswa kweichi sevhisi kwete chete nekuti ndeye mahara uye tinogona kuchengeta mavhidhiyo ese nemifananidzo yatinoita neyedu kifaa, asi zvakare nekuti Izvo zvakaitwa mukugadziriswa kwayo kwepakutanga, chero bedzi mavhidhiyo anga asiri 4k uye Mapikicha anga asiri anopfuura 16 mpx. Asi nekufamba kwenguva Google yanga ichiunza shanduko kune yakashata, nekuti iyi sarudzo yakava kumanikidza kwemifananidzo kunyangwe hazvo mudziyo wedu wanga usina muganho resolution ye16 mpx. Asi shanduko yanga isiri yechakaipa.
Ivo vakomana paGoogle vaisa imwe sarudzo, sarudzo inogona kunge isina kunyatso kuzivikanwa kune vazhinji vashandisi. asi zvakare yakachichinja kuita chinopfuura chinokurudzirwa sevhisi sezvo isu taikwanisa kumisikidza yedu iPhone kuitira kuti chete makopi agogadzirwa kana kifaa chedu chiri kuchaja, chakanakira patinotora yakawanda mifananidzo uye iyo yekuchaja maitiro anotora chinguva. Nenzira iyi, kana panguva dzemangwanani takatora mafoto kana mavhidhiyo mazhinji, tichishandisa bhatiri rinoshandiswa, kana uchibatanidza kune netiweki yeWi-Fi, iko kunyorera kunotanga kuita kopi, pamwe nekurasikirwa kuri kuita nebhatiri rekuwedzera.
Hatizive chikonzero nei Google Mifananidzo yakabvisa sarudzo iyi, uye kana mune ramangwana ichizoishandisa zvakare, asi sevhisi yekuchengetedza iyi yarasikirwa nechimwe chezviitiko zvakavanzika izvo zvakatibvumidza kuti tiite kopi yeedu rese reel nguva imwe neimwe isu akatakura mudziyo wedu. Google inofanirwa kufunga zvakanyanya nezve hupenyu hwebhatiri rwema smartphones uye isa parutivi izvo zvaunoda kupa neiri sevhisi, chiriporipocho chinogona kubatsira boka diki revashandisi, asi kwete kune vazhinji, ruzhinji vanonyatsoda kuti mapikicha avo aendeswe pagore apo iyo iPhone iri kutakurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Sarudzo yekuisa iwo mafoto kana isu tikarongedza iyo iPhone haichawanikwe muGoogle Mifananidzo
Zvakanaka, ndinobvumirana zvachose, pandakasvika kuhotera ndikakuisira mari, ndipo pandakatanga kuisa mapikicha, nekuti ini handidi kushandisa bhatiri pandinenge ndichifamba mumugwagwa, ndiri kuenda kunotora mafoto, shandisa mepu kuti uone kuti sei kuenda kupi nezvimwe ... uyezve pandinenge ndichitozvitakura ndipo pandiri kufarira kuzviisa kwete zvisati zvaitika.
YouTube inozivisa kuti kutamba kwayo kunoenderana nehukuru hwevhidhiyo